I-1BD Downtown enethezekile
Le 1BD enethezekile enekhishi eligcwele kanye nosilingi olungaphekiwe ivulekile futhi iyaphumula. Jabulela umbhede olingana nendlovukazi egumbini elikhulu lokulala, umabonakude endaweni yasekhishini, igumbi lokuhlala, ipayipi lakho siqu futhi uzigcwalise, ubhavu wangasese wamaminerali (hhayi okushisa, cishe u-100*), i-gas grill endaweni evamile, izingadi ezinomkhiqizo wesizini, ibanga elifushane ukuya Izitolo ze-Hot Mineral Springs District kanye nezitolo zedolobha, ngaphesheya komgwaqo ukusuka egilosa yasendaweni nasezindaweni zokupaka izimoto.
Ikhululekile futhi ivulekile. Wonke upende omusha nokhonkolo, uthayela endlini yokugezela kanye nephansi lezinkuni elilungisiwe kulo lonke. Ubuhle bomlando, bulungisiwe futhi buhlanzekile. Amalineni ageza ngensipho enobungane emhlabeni kanye nomugqa womisiwe. Ukuhlanza kwenziwa ngezihlanzi "eziluhlaza" ezingenamakhemikhali futhi indawo ayilungile. Ikhishi eligcwele elinesitofu segesi lenza ukupheka ngokwakho kube lula futhi kube lula. Itafula lokudlela elincane ozolisebenzisa kanye nokwamukela okuhle kakhulu kwe-wi-fi. Okusanda kungezwe umabonakude ohlakaniphile, ukuze izihambeli zikwazi ukungena ngemvume ku-Netflix yazo noma amanye ama-akhawunti e-inthanethi. Igobolondo likabhavu oshisayo egcekeni langasese ukuze ugcwalise ngamanzi amaminerali afudumele. (Amanzi awashisi, 100*). Awekho amajethi noma yini ewubukhazikhazi, isitsha nje sokubamba amanzi aphilisayo.
Okuhle kakhulu ngomakhelwane indawo. Ubekwe endaweni eyimfihlo kakhulu kodwa ngaphesheya nje kwegilosa yasendaweni futhi ezansi nebhulokhi kukhona umugqa oyinhloko wedolobha. Idolobha lithulile, linethezekile futhi liphephile. Isifunda samaminerali esishisayo siphansi kwe-Austin Street ukuze kufinyeleleke kalula emanzini okuphulukisa.
Kuyathakazelisa kakhulu futhi kunobungane, vele usitshele okudingayo futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukusiza. Angikho esizeni kodwa ngitholakala ngocingo noma nge-imeyili. Izingxoxo zothando nemibuthano enobungane.